लोकसेवाको विज्ञापन कुनैपनि हालतमा रद्ध हुदैन, चित्त नबुझे सर्वोच्च जानुहोस्ः मन्त्री पण्डित
सरकारको कुरा नसुन्दै निर्णय हुन्छ ? यदि हुन्छ भने त्यो कति जायज हो ?’
निशान न्युज जेष्ठ २८, 2076
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन कुनैपनि हालतमा रद्द नगर्ने बताएको छ । समावेशी समानुपातिक नभएको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले रद्द गर्न दिएको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै मन्त्री लालबाबु पण्डितले कानुनअनुसार गरिएको विज्ञापन खारेज नहुने बताएका हुन् ।
सञ्चार केन्द्र नेपालले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले समितिलाई आफ्नो निर्देशनको कानुनी वैधता पुष्टि गर्नसमेत चुनौती दिए । उनले भने, ‘उक्त निर्देशनको पुष्टि सम्बन्धित समितिले नै गर्नुपर्छ ।
लोकसेवाले विज्ञापन कानुनसम्मत भएको पुष्टि गर्छ । संवैधानिक विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको निरुपण सर्वोच्च अदालतले गर्नेमा दुईमत छैन । विज्ञापन कानुनसम्म छ । त्यसैले खारेज गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।’
समितिले आफ्ना कुरा नसुन्दै रद्द गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै समितिको निर्देशनमाथि पनि उनले प्रश्न उठाए, ‘मैले बोल्नुअघि निर्णय गरिसक्यौं । केही भन्नु छ ? भनेर सोधियो । मन्त्रीको कुरा नसुन्दै निर्णय हुन्छ ? सरकारको कुरा नसुन्दै निर्णय हुन्छ ? यदि हुन्छ भने त्यो कति जायज हो ?’
समितिले करारमा भर्ना गर्नु भनेर निर्देशन दिएको छ । तर, कानुनले कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, टाइपिस्टबाहेक कर्मचारी करारमा लिन नमिल्ने बताएको छ,’ मन्त्री पण्डितले भने ।
समस्या संसदीय समितिले नै सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ । संघीय निजामति ऐन आफूले ६ महिनाअघि नै संसदमा दर्ता गरे पनि उक्त समितिले पास गर्न विलम्ब गरेको भन्दै उनले थपे, ‘पुरानो निजामति सेवा अनुसार जे व्यवस्था छ । त्यही अनुरुप हामीले विज्ञापन गरेका हौं । समावेशी छैन भन्ने सरासर गलत हो ।’ हाल माग गरिएको ९ हजार एक सय ६१ पदमा ८० हजार एक सय ४१ जनाले फाराम भरिसकेको जानकारीसमेत उनले गराए ।
समावेशी कोटामा पनि दरखास्त आएको भन्दै उनले जनजातितर्फ ९ हजार ६ सय ४९, मधेसीतर्फ ४ हजार ४ सय ४८, पिछडिएको क्षेत्रतर्फ २०, दलित ५ सय ६३, महिलातर्फ २० हजार १ सय ७७, अपांगतर्फ ४३ जनाले फाराम भरिसकेको बताए ।
साढे ६ लाख युवाले लोकसेवा तयारी गरेको र त्योभन्दा बढीले यो विज्ञापनमा दरखास्त दिने तयारी गरेको बताउँदै उनले रद्द गर्न नसकिने उल्लेख गरे ।
मन्त्रालयले भन्यो, एसईई चाडैँ हुन्छ, तयारी गर्नुस्
काठमाडौं । परिक्षा नै नलिई कक्षा उत्तिण गराइनुपर्ने चर्चा चलिरहँदा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)...
लकडाउनभर विद्यालय नखुल्ने, विद्यार्थी भर्ना अभियान अनिश्चत
काठमाडौं । आगामी शुक्रबारदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरु हुने अन्तिम तयारी भइरहेका बेला लकडाउनक...
काठमाडौं । लकडाउन अन्त्य भई अन्य अवस्था सामान्य भएमा त्यसको दुई सातापछि मात्र माध्यमिक शिक्षा परी...
लोकसेवा आयोगको फारम भर्ने म्याद १ हप्ता थप
काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा दरखास्त दिनका लागि अन्तिम म्याद थपेको छ । ओयोले मंगलबार जारी...
लोक सेवा अनलाइनको हैरानीः अपेक्षाभन्दा कम आवेदन आउँदा पनि किन समस्या ?
काठमाडौं । शुरूमा लोक सेवाको विज्ञापनमा अनलाइन आवेदन दिने पेज जततउस्ररउकअयलष्लिभ।उकअ।नयख।लउ नै खु...
लोकसेवा आयोगको विज्ञापनबारे सर्वोच्चमा आज सुनुवाई हुँदै
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा आज सुनुवाई हुँ...